EZINGENA MANJE: AbakwaGupta sebedayise enye inkampani | News24
Cape Town – Inkampani yomndeni wakwaGupta, i-Oakbay Investments, isidayise iTegeta Exploration and Resources iyidayisela inkampani yaseSwiss (Switzerland), iCharles King SA, ngesamba semali esingu-R2.97bn, imemezele kanjalo ngoLwesithathu.
Le nkampani iseqhulwini embikweni walowo owayenguMvikeli woMphakathi, uThuli Madonsela, iState of Capture (ukulawulwa kombuso), nowathola ukungahambisi kahle mayelana nokusebenzisana kwayo no-Eskom. UBrian Molefe wabeka phansi izintambo kwa-Eskom ngenxa yalo mbiko ngo-2016.
Indodana kaMengameli Jacob Zuma, uDuduzane, naye ubengomunye wabanikazi bamasheya kule nkampani.
ITegeta, nehlanganisa i-Optimum, iKoornfontein kanye ne-Optimum Coal Terminal, “kamuva ibone uguquko olusheshayo ezimalini zayo”, i-Oakbay isho kanjalo esitatimendeni. “Evela ekutakulweni kwebhizinisi esikhathi esingaphansi konyaka esedlule, lama bhizinisi womathathu manje asebekwe esimweni sokugcina ukuqhubekela phambili futhi enze inzuzo.”
“Lokhu kudayisa kuncike kwimibandela yokulawulwa kanye nokugcinwa kwemibandela yesivumelwano, okulindeleke ukuthi kuphothulwe esikhathini esiyizinyanga ezingu-12.
“I-Oakbay ibeke umbandela wokuthi umthengi kumele avikele imisebenzi emayini. Ngaphezu kwalokho, isivumelwano sikubeke umbandela wokuthi umthengi kumele abe namasheya angekho ngaphansi kwangu-30% azonikezwa umlingani ozofukulwa omnyama.
“Lokhu kudayisa kuyingxenye yokuzibophezela kwe-Oakbay ekuvikeleni imisebenzi kanye nokunikeza isiqiniseko kubasebenzi abangaphezu kuka-7 500 abasebenza kanzima enkampanini kanye nokuvikela umongo wokubaluleka kwebhizinisi abasebenza kulona.
“Ngaphansi komnikazi wamasheya onobuningi, i-Oakbay ikholwa ukuthi kokubili ibhizinisi kanye nabasebenzi bazoba nekusasa eliqhakazile futhi eliyimpumelelo nelibafanele. Lokhu kudayisa kuzophinde kuvulele abanikazi bamasheya isikhathi sokugxila ekugezeni igama labo phambi kwezinsolo ezingenasisekelo zabezindaba,” le nkampani isho kanjalo.